Golaha Capinetka DDSI oo Shiray maanta Kuna Ansixiyay Ka faaiidaysiga Toga Faafan iyo Laagaha Dhinaca waxsoosaarka. - Cakaara News
Golaha Capinetka DDSI oo Shiray maanta Kuna Ansixiyay Ka faaiidaysiga Toga Faafan iyo Laagaha Dhinaca waxsoosaarka.
Jigjiga(CN) Isniin August-4-2015.waxaa maanta shir isugu yimid dhamaanba xafiisyada capinetka DDSI hoolka shirarka capinetka ee xafiiska madaxwaynaha DDSI iyadoona uu shirgudoon ka ahaa Madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
madaxwaynaha ayaa Golaha Fulinta soo hordhigay ajandayaasha laga doodayo ee daraasaadkoodu dhamaystirka ku dhawyahay kuwaasoo loogaga faaiidaynayo Bulshada xoolodhaqatada ah Togaga aanay wax manaafacaad ah ku qabin bulshadu.
Ajandaha maanta ayaa ahaa 1-Dhagaysiga,ka doodida iyo Ansaxinta Mashruuca Spate Irrigationka laga hirgalin doono sanadkan Togga Faafan oo loogaga faaiidayn doono Tuulooyinka ay maraan Faafan iyo Jarar kana mid yihiin BAka,Goomaar,Wijiwaaji iyo maraacaato halka ajandaha 2aadna uu ahaa 2-Ka faaiidaysiga laagaha Deegaanka.
Khabiirka mashaariicdan daraasaadkooda gacanta ku hayay oo ah Khabiir heer federal ah kuna xeeldheer Cilmiga Hydarologiga iyo biyoxidheenada Mr Dhambalaash ayaa warbixin isugu jirtay muuqaal iyo Qoraal ku soo bandhigay sida ugu haboon ee bulshada 4ta goob ee la xushay loogaga faaiidayn lahaa Biyaha Togaga Faafan iyo Jaran.
Khabiirka ayaa sheegay in Togaga faafan iyo jarar ee looga faaiidaysanayo dhanka waxsoosaarka beeraha goobaha dhulbeereedka ku haboon ee la xushay sanadka 2008 Beka,Goomaar,Wijiwaaji iyo maraacaato la dhamaystiray islamarkaana 10 goobood inta u dhaxaysa laga soo leexinayo biyaha toga wax aan ka badnayd 10M3 laguna leexin doono 10 Biyo-xidheen oo loo dhisi doono iyadoona biyaha togu intiisii kale ay sidiisii ahaanayaan gaadhi doonaana halkii uu gaadhi jiray.
Khabiirka ayaa sheegay in Tuulada Baka waxsoosaarka beeraha loo diyaarin doono dhul dhan 2500 Hectar,Goomaar-shaygoosh 3000 Hectar,Wijiwaaji 2500 Hectar 4-Maraacaato 3000 Hectar kuwaasoo dhamantood qayb ka noqon doona barnaamijka ka faaiidaysiga wabiyada iyo dooxooyinka ee dibudejinta.
Capinetka iyo madaxwaynaha ayaa suaalo ka waydiiyay khabiirka qaybo ka mida daraasaadka khabiirka siiba dhererka iyo balaca sida daraasaadka ku xusan ay yeelan doonaan dhismayaasha 10ka biyoxidheen isagoona jawaabo waafiya si cilmiyaysan uga bixiyay walow lagu celiyay meelaha qaar inuu dib ugu noqdo lana siiyay mudo labo cisho ah.
Intaa ka dib daraasaadka iyo Naqshada 4ta Goobood ee Spate Irrigationka laga fulinayo mashaariicaha MDG sanadkan ee saaka laga dooday maadaama ay dhamaystiran tahay si bilawga sanadkan 2008 loo fuliyo ayaa uu goluhu Cod buuxa ku ansixiyay 4ta goobood iyo fulinta wakaalada dhismaha sidoo kalana waxa uu goluhu ansaxiyay naqshada sida loogaga faaiidaysan doono biyaha Laagaha loogu dhisayo (biyo-xidheeno) ayaa iyana cod buuxa uu goluhu ku ansaxiyay.
Hirgalinta mashaariicdan lagaga faaiidaysanayo Biyaha togaga Faafan iyo Jarar ayaa noqonaysa markii 1aad ee Deegaanku ka faaiidaysto kuwaasoo deegaanka inta badan ka dhigi doona masnooyin ay bulshadu gacmahooda wax kula soo baxaan.
Isku soo wada duuboo mashaariicdan ayaa waxaaku bixi doona aduun lacageed oo kor u dhaafaya 1billion oo MDG ka ah